သေနတ်များ နှင့် နှင်းဆီများ - ဝီကီပီးဒီးယား
Guns N' Roses in 2017. From left to right: Dizzy Reed, Richard Fortus, Duff McKagan, Axl Rose, Slash, Melissa Reese & Frank Ferrer
သေနတ်များနှင့် နှင်းဆီများ(Guns N' Roses)(တိုက်ရိုက်အသံထွက်- ဂန်းစ် အင် ရို့စ်) သည် အောင်မြင်ကျော်ကြားသည့် အမေရိကန် ဟာ့ဒ်ရော့ခ်တီးဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုတီးဝိုင်းကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် လော့စ်အင်ဂျလိစ်တွင် ဖွဲ့သည်းခဲ့သည်။ ကနဦး အဖွဲ့ဝင်ငါးဦးမှာ အိပ်ဇယ် ရို့စ် (အဆို)၊ စလက်ရှ်(လိဒ်ဂီတာ)၊ အက်ဇီ စတရတ်ဒလင်(ရေသမ်ဂီတာ၊ နောက်ခံအဆို)၊ ဒဖ် မက်ကေဂင်(ဘေ့စ်၊ နောက်ခံအဆို)နှင့် စတီဖင် အက်ဒလာ(ဒရမ်) တို့ဖြစ်ကြသည်။ ဤတီးဝိုင်း၏ အကျော်ကြားဆုံးသီချင်းများမှာ Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O'Mine, Patience, Live and Let Die, November Rain", Knockin' on Heaven's Door, Don't Cry, နှင့် Civil War တို့ဖြစ်ကြသည်။
၎င်းတို့ဖန်တီးသည့် တေးဂီတများသည် ထိုအချိန် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအတွင်း ကျော်ကြားသည့် ရော့ခ်တေးဂီတအမျိုးအစားများထဲမှ ပုံစံကွဲနေသည်။ ၎င်းတို့၏ တေးသီချင်းများသည် ပိုမို မာကျောသည့် ရော့ခ်ပုံစံဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ရော့ခ်တေးဂီတနှင့် အနီးစပ်ဆုံး တူသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့ကို လူအများက စိတ်ဝင်စား လူကြိုက်များလာခဲ့လေသည်။ ၎င်းအဖွဲ့ကို ၁၉၈၅ ခုနှစ် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုရှင်အဖြစ် အိပ်ဇယ် ရို့စ်၊ ဂီတာအတီးသမားအဖြစ် ထရေစီ ဂန်းစ် နှင့် လက်ဇီ စတရတ်ဒင်၊ ဘေ့စ်ဂီတာသမားအဖြစ် အိုလီ ဘိုက်ချ်၊ ဒရမ်အတီးသမား ရောဘ့်ဂါ့ဒ်နာတို့ဖြစ်သည်ကြသည်။ အိပ်ဇယ်၏ တီးဝိုင်းအဟောင်း၏ အမည်မှာ ဟော်လိဝုဒ် ရို့စ် ဖြစ်ပြီး ထရေစီ၏ ယခင်တီးဝိုင်းမှာ အယ်အေ ဂန်းစ် ဟူ၍ ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ ပေါင်းစည်းပြီးနောက်ပြီးတွင် ဂန်းစ် အင် ရို့စ် ဟူ၍ အမည်ပေးခဲ့လေသည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဂန်းစ် အင် ရို့စ် အဖွဲ့သည် စိတယ်လ်၌ ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်ရာ ထိုပွဲကို ထရေစီ ဂန်းစ်နှင့် ရော့ဘ် ဂါ့ဒ်နာတို့ တတ်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ ထိုအခါ ရို့စ်၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော ဂစ်တာသမား စလက်ရှ်နှင့် ဓရမ်သမား စတီဖင် အက်ဒ်လာ အား အကူအညီပေးရန် ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ သဘောတူပြီး လာရောက်ပူးပေါင်းကာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် လော့စ်အိန်ဂျလိစ်သို့ ပြန်လာရာလမ်းတွင် ၎င်းတို့ ၅ ဦးပါဝင်သည့်အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ အကျော်ကြားဆုံးသီချင်းဖြစ်သည့် တောနက်မှ ကြိုဆိုပါ၏ (Welcome to the Jungle) ကို ရေးဖွဲ့ခဲ့လေသည်။ ၁၉၉၀ တွင် ဒရမ်သမား စတီဖင် အက်ဒလာအား ၎င်း၏ ဒရမ်အတီး အဆင်မပြေသဖြင့် အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ၎င်းနေရာတွင် သည် ကော့လ်တ်(The Cult) မှ ဒရမ်သမား မတ် ဆိုရမ် နှင့် အစားထိုးခဲ့လေသည်။ ဝက်စ်တ် ရော့သ် မှ ဂီတာသမား ‌ဒေ့ဗ် ခက်ရှ်နာ၊ စတုန်း တန်ပယ် ပိုင်းလော့ဒ် မှ စကော့ ဝိုင်လက်၊ စလက်ရှ်၊ မက်ကေဂင် နှင့် ဆိုရမ် တို့သည် ဗဲဗက် ရီဗော်ဗာ အားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Appetite for Destruction အယ်လ်ဘမ် ထွက်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များ လမ်းခွဲခဲ့ကြကတည်းက ရို့စ်တစ်ဦးတည်းသာ အဖွဲ့၏ ပင်တိုင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ကျန်ရှိနေခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဝင်သစ်များဖြင့် မကြာခဏပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ သီဆိုခဲ့သည့် နောက်ဆုံးအယ်လ်ဘမ်မှာ ချိုင်းနိစ် ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပြီး ဆယ်နှစ်ခန့် နောက်ကြပြီးမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စလက်ရှ်နှင့် ဒဖ် တို့ အဖွဲ့တွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့နှင့်အတူ အဖွဲ့၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် မယ်လစ်ဆာ ရီးစ် လည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။ 
အိပ်ဇယ်ရို့စ် စင်မြင့်ပေါ်တွင် ဖျော်ဖြေနေချိန်၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ၂၀၀၆
ဂန်းစ် အင် ရို့စ်စက်စ် ဖျော်ဖြေနေပုံ
↑ "Guns N' Roses confirm reunion lineup". Consequence of Sound. 2016-01-06. Retrieved 2017-06-28.
↑ Tavana, Art (2017-05-03). "Guns N' Roses' First Female Member Has BecomeaRock Icon". L.A. Weekly. Retrieved 2017-06-28.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သေနတ်များ_နှင့်_နှင်းဆီများ&oldid=708738" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၁၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။